Pixelmator Pro dia hanampy fampidirana amin'ny fampiharana MacOS Monterey Shortcuts | Avy amin'ny mac aho
Nandritra ny WWDC21 lasa teo, Apple dia nanambara fa ny fampiharana Ny hitsin-dalana dia ho tonga amin'ny macOS Monterey ihany amin'ny maha-rindrambaiko mahaleo tena sy fiasa mitovy amin'ilay azontsika jerena ao amin'ny iOS. Misaotra an'ity fampiharana ity, ny mpampiasa dia afaka mamorona automatique amin'ny alàlan'ny fampiharana Shortcuts ao amin'ny macOS Monterey, fampiharana iray ahafahanao manafatra automatique efa noforonina miaraka amin'ny Automator. Araka ny hitantsika ao amin'ny lahatsoratra bilaogy farany avy amin'ny Pixelmator, ny ekipan'ity fampiharana ity dia nanambara fa miasa amin'ny fampifanarahana ny Shortcuts miaraka amin'ny Pixelmator Pro application amin'ny macOS.
Ankehitriny rehefa tapitra ny WWDC (fitiavana be dia be indray, amin'ny endrika virtoaly vaovao!), Te-hizara fanavaozam-baovao haingana dia haingana aminao fotsiny izahay: Pixelmator Pro dia hanana fanohanana ireo hitsin-dàlana. Ary hanao izay fara herinay izahay mba hahazoana antoka fa izany fanohanana izany dia kilasy voalohany, ny tsara indrindra.
Rehefa manampy fanampiana ho an'ny fampiharana Shortcuts i Pixelmator Pro dia ho afaka ny mpampiasa manova ny haben'ny sary amin'ny bokotra iray monja na baikony ary asio preset aza amina sary maro. Ohatra, amin'ny sary etsy ambony, ny ekipan'ny Pixelmator Pro dia mampiseho hitsin-dàlana "Enhance", toerana anaovana habe ny sary amin'ny alàlan'ny famerenana ny Super Resolution ML. Tsotra toy izany.
Ny fanavaozana lehibe farany an'ny Pixelmator Pro dia nampidirina tamin'ny faran'ny taona lasa tamin'ny interface tsara ho an'ny mpampiasa nohavaozina miaraka amina endrika vaovao ho an'ny biraom-pitaovana ary sidebars editor, ao anatin'izany ny browser effects
Niitatra be koa izy ireo Safidy fanamboarana interface interface. Tamin'izany fotoana izany, ny fanavaozana Pixelmator Pro 2.0 dia nitondra fanampiana ho an'ny macOS Big Sur sy MacBook vaovao ary Mac mini miaraka amin'ny teknolojia M1.
Amin'izao fotoana izao, ny mpamorona an'ity rindranasa ity, dia miasa amin'ny Pixelmator Pro 2.1, kinova izay hanampy ny fahitana mijery haingana sy mametraka loko voalohany sy faharoa, fomba iray hanovana ny lokon'ny zavatra rehetra ao anaty antontan-taratasy amin'ny alàlan'ny drag and drop, ary ny fiasa ML Clipping vaovao, izay mamakafaka ny firafitr'ireo sary mampiasa milina mianatra algorithm ary manome ny soso-kevitr'ireo mpampiasa momba ny fomba nanapotehana ny sary hanintona azy kokoa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Pixelmator Pro dia hanampy fampidirana amin'ny fampiharana macOS Monterey Shortcuts